बस्नु है आमा तपाईलाई खाना खाने समयमा आइपुगुला भनेर स्कुल गएकि भागरथीको सम्झनामा आमा ! – Dainik Sangalo
February 10, 2021 553
गाउँकी होनहार किशोरी भागरथी १७ वर्षकी मात्र थिइन् । विद्यालयवाट घर फर्किदै गरेकी भागरथी घर पुगिनन् । तर लवलेक सामुदायिक वनको बनमाराको झा डी मा भाररथीको शव फेला परेको थियो । उनको शवको प्रकृति हेर्दा पनि निर्मला पन्तकै जस्तो घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको थियो । तर अहिले प्रहरीले घटना सोही प्रकृतिको भएको पुष्टि गरिसकेको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
बुवाको निधन भएको ४५ दिन पनि भएको थिएन । दाई भारत गएको १० दिन मात्र भएको थियो । घरको जिम्मेवारी भागरथीकै काँधमा थियो । स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयबाट बुधबार घर फर्किने बेला नै सम्पर्क विहीन भएकी भागरथीको विषयको अपत्यारिलो खबर उनीहरु सबै स्वीकार्न विवश छन्। ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
पति वियोगको आँसु नथामिदै छोरी गु’मा’उन पुगेकी द्रोपतीले त्यतइ ठूलो चो ट सहन सकेकी छैनन् । निर्मला पन्तको घटना भएको यति धेरै समय हुँदा पनि घटनामा संलग्न पक्राउ पर्न सकेको छैन । त्यसैले यो घटनामा पनि त्यस्तै नहोस भनेर सबैको ध्यान तानेको छ । अहिले रवि लामिछाने घ’ट’ना’स्थलमा पुगेका छन् । रवि लामिछानेले घ’ट’ना’स्थलमा पहिलो पटक भागरथीको श’व देख्ने ब्यक्तिले भनेका कुराहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनले घ’ट’ना’स्थलको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा खुलाएका छन् ।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ (कतोला) चडेपानीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट सिर्कोटस्थित सनातल धर्म माध्यमिक विद्यालयमा वाणिज्य संकायमा कक्षा १२ मा पढि्थन् । घरबाट स्कुल पुग्न झण्डै एकघण्टा जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ । यद्यपि स्कुल जाँदा-आउँदा साथीहरु हुन्थे ।बुधबार २ बजे पढाइ सकेर उनी स्कुलबाट हिँडिन् । तर, अरु दिनजस्तो उनी घर पुगिनन् । स्कुलबाट छुटेका साथीहरुले हामी कपाल का’ ‘टेर आ’उँछौं, तिमी हिँड्दै गर भनेका थिए । हुन्छ भनेर हिँडेकी उनी घर नआएपछि आमा द्रोपतीले हा’रगुहा’र गरिन्, खोजीमा जुटिन् । तर, भागरथीको अत्तोपत्तो भएन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
भोलिपल्ट बिहीबार स्कुलबाट फर्किएकाहरुले लबलेक सामुदायिक वनमा बनमारा झा’डी मा’डि’ए’को देखे । भागरथी हराएको थाहा पाएका उनीहरुले गाउँलेलाई खबर गरे । गाउँ नजिकै रहेको प्रहरी चौकीबाट प्रहरीहरु पनि पुगे । प्रहरीका अनुसार सडकबाट झण्डै ५० मिटर तल झाडीमा भेटिएकी थिईन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी निरीक्षक जनक धामीका अनुसार शनिबार जिल्ला अस्पतालमा भट्टको पोष्टमार्टम गर्दा करणी पछि ज्यान लिएको पुष्टी भैसकेको छ । अहिले सुदूरपश्चिमबाट एसएसपी जनकराज पाण्डे बैतडी पुगेका छन् भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट पञ्चकुमार बाखुको टोली पुगेको छ ।
घटनास्थलमा लगिएको प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले भागरथीको मोबाइल पनि भेट्टाएको छ । तर, अहिलेसम्म घटनामा संलग्न भएको आरोपमा कोही पक्राउ परेका छैनन् । ‘घटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान होस् भनेर भनेकाघटनालाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान होस् भनेर भनेका छौं’ गाउँपालिका अध्यक्ष कार्की भन्छन्, यो यति वि’भ’त्स घटना छ कि दोषीलाई मृ ‘त्युद”ण्ड पनि कम हुन्छ ।’
Prevअन्तिप पटक छोरी भागिरथले बोलेको त्यो शब्द, बाटो हेरेर आँखाहरु थाके तर छोरी फर्किनन् !
Nextप्रचण्ड-नेपाल पक्षको प्रदर्शन खिचिराखेको ड्रोन क्यामेरा भिडमा खस्यो
अहिले भर्खरै काठमाडौंको न्यूरोडमा यी बालिका भेटिएकी छिन्। चिन्नुहुन्छ भने परिवारमा खबर गरिदिनुहोला ।
जनताले खर्च धान्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा पनि भंग गरिदिने ओली समूहको तयारी
प्रमोसन भएपछी ‘ट्रीट’ दिन्छु भनेकी सुनिताले सबैलाई रुवाएर संसार छो’डीन्…!
जगदम्बा स्टीलले भारतीय गाडी ल्याएपछि सिमरावासी आन्दोलित
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127087)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97404)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (74745)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (69530)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64539)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (55503)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50398)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (44063)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43985)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (42345)
भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल बैसाख ०९ गते बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल २२ तारिख
पैसाको व्यापार गर्दै एक वृद्ध, एक रुपैयाँ नोटकोनै यति धेरै मूल्य हेर्नुस।
दिल्लीबाट घर फर्किने क्रममा ३२ वर्षीय रामदत्तको बाटोमै मृ’त्यु
घर जान नपाइने ड’रले लकडाउन हुनुअघि सहर छोड्नेको घुँ’इचो